Kupindwa Muropa Nedoro, Mutengesi Wezvinodhaka | Bhaibheri Rinochinja Upenyu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bicol Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Lingala Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
CHII chakaita kuti mumwe murume ane zvaimushungurudza paaikura agume ava baba vemba vakanaka, vanofara? Chii chakaita kuti mumwe mukadzi aiita zvakaipa zvakawanda agume achinja mararamiro ake? Verenga unzwe kuti vanhu ava vanotii.
“Ndaiona sokuti handibatsiri chinhu.”—VÍCTOR HUGO HERRERA
NHOROONDO YOUPENYU: KUPINDWA MUROPA NEDORO
Ndakaberekerwa muguta rakanaka chaizvo riri kumaodzanyemba kweChile rinonzi Angol. Handina kumbobvira ndaziva baba vangu. Ndava nemakore matatu, amai vangu vakatama neni nomunun’una wangu tikanogara kuguta guru romuChile rinonzi Santiago. Takaguma tava kugara kuzvitangwena. Taishandisa chimbudzi chevoruzhinji uye mvura taiiwana mupombi yemvura yokudzima moto.
Kwapera makore anenge maviri, hurumende yakatipa kamba kaduku. Asi kwatakanga tava kugara kwaiva kwakazara vanhu vaishandisa zvimwe zvinodhaka, vaiita zvoutsotsi nechipfambi uye zvidhakwa.
Rimwe zuva amai vangu vakaonana nomumwe murume uyo wavakazopedzisira varoorana naye. Baba vangu vokurera ava vaiva chidhakwa chisingaiti. Vaigara vachitirova ini naamai. Ndaiwanzochema ndiri ndoga, ndichingoti dai ndina baba vanondidzivirirawo.
Kunyange zvazvo amai vangu vaishanda nesimba kuti vatiriritire, taidya nhoko dzezvironda. Patainzwa nzara, dzimwe nguva zvokudya zvaingovapo mukaka woupfu neshuga. Ini nemunun’una wangu taimbonodongorera terevhizheni yevavakidzani vedu nepahwindo kuti timbozvivaraidzawo. Asi rimwe zuva muvakidzani wedu akatibata, uye ndopakabva paperera sarungano!
Baba vangu vokurera vaigara vakangodhakwa, asi kashoma kavainge vasina vaimbotitengerawo zvokudya, ini nomunun’una wangu. Rimwe zuva vakatitengera katerevhizheni kadiki. Ndiyo imwe yenguva shoma dzandinorangarira ndichimbofarawo.
Ndakazodzidza kuverenga ndava nemakore 12. Kwapera gore, ndakasiya chikoro ndikatanga kushanda. Ndaiti ndapedza basa ndoenda kumapati nevanhu vakuru vandaishanda navo kwatainodhakwa nokushandisa zvimwe zvinodhaka. Pasina nguva ndakanga ndapindwa muropa.
Ndava nemakore 20, ndakaonana naCati, tikapedzisira taroorana. Pakutanga zvose zvaifamba zvakanaka, asi ndakatangazve kuita zvandaimboita. Ndakanga ndava kutonyanya kudhakwa kupfuura zvandaimboita. Ndakazoona kuti mararamiro aya aizoita kuti ndigume ndasungwa kana kuti ndafa. Uyezve, ndakanga ndichishungurudza mwanakomana wangu Victor nezvinhu zvaindishungurudzawo ndichiri mudiki. Ndaizvidya mwoyo, ndaishatirwa, uye ndaiona pasina chokuraramira.
Munenge muna 2001, zvimwe Zvapupu zvaJehovha zviviri zvakatishanyira pamba pedu, uye vakatanga kudzidza Bhaibheri naCati. Aindiudza zvaaidzidza. Ndakatangawo kudzidza Bhaibheri, ndichingoitira kuda kuziva. Muna 2003, Cati akabhabhatidzwa somumwe weZvapupu zvaJehovha.
Rimwe zuva ndakaverenga Rute 2:12, inoti Jehovha anokomborera vaya vanoratidza kutenda uye vanopotera kwaari. Ndakadzidza kuti kana ndikachinja mararamiro angu, ndaigona kufadza Mwari uye aizondikomborera. Ndakaona kuti ndima dzeBhaibheri dzakawanda dzinoshora udhakwa. Mashoko ari pana 2 VaKorinde 7:1 akandibaya mwoyo. Ndima yacho inotikurudzira kuzvichenesa “pazvinhu zvose zvinosvibisa.” Saka ndakatanga kusiya maitiro angu akaipa. Pakutanga, hasha dzangu dzakatowedzera, asi Cati akaramba achingonditsigira.
Ndakapedzisira ndasiya basa nokuti ikoko kwaiva nomuedzo wakakura wokuti ndisvute uye ndinwe doro. Urovha hwakamboita kuti tirarame nezvishoma chaizvo, asiwo izvi zvaindipa nguva yakawanda yokudzidza Bhaibheri. Ndipo pandakatanga kuita zvaienderana nezvandaidzidza. Cati haana kumbonetsa nokuda twakawanda-wanda, uye haana kumbondishora kuti taisava nezvakawanda. Ndinotenda chaizvo rutsigiro nerudo rwake.
Zvishoma nezvishoma ndakatanga kuwadzana neZvapupu. Zvapupu zvakandibatsira kunzwisisa kuti Jehovha anokoshesa chido changu chepamwoyo chokumushumira, pasinei nokuti handina kudzidza. Rudo uye kubatana zvatakaona muungano yechiKristu zvakabatsira mhuri yangu chaizvo. Takanga tisati tamboona vanhu vanogarisana murunyararo zvakadaro. Ndakazobhabhatidzwawo muna December 2004.
Ndakaona kuti mashoko aJehovha ari pana Isaya 48:17 ndeechokwadi, anoti: “Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe.” Amai vangu nomunun’una wangu vakabayiwa mwoyo chaizvo nokuchinja kwandakaita zvokuti vava kudzidzawo Bhaibheri. Kunyange vavakidzani vedu vanofara chaizvo kuona kuchinja kwandakaita, uye kuti mhuri yedu yava kufara chaizvo.
Ndine mudzimai anoda Mwari uye anondiona seshamwari yake yaanovimba nayo. Kunyange zvazvo ndisina kumboziva baba vangu, Bhaibheri rakandidzidzisa kurera vanakomana vangu vatatu. Vanondiremekedza. Chinonyanya kukosha ndechokuti vanoona Jehovha somunhu chaiye, uye vanomuda.
“Kunyange zvazvo ndisina kumboziva baba vangu, Bhaibheri rakandidzidzisa kurera vanakomana vangu vatatu”
Ndinotenda chaizvo kuti pasinei nokushungurudzika kwandakaita ndichiri muduku, Jehovha akandipa mukana wokuva munhu anofara.
“Ndakaguma ndava musikana ane hasha, anoda zvokurwa.”—NABIHA LAZAROVA
NHOROONDO YOUPENYU: MUTENGESI WEZVINODHAKA
Ndakaberekerwa muSofia, kuBulgaria, mumhuri yaiva noupenyu huri pakati nepakati. Baba vangu vakatitiza ndiine makore matanhatu. Handina kumbofunga kuti vangadaro, saka ndakarwadziwa zvisingaiti. Ndaiona sokuti baba vandiramba uye kuti handina kukodzera kudiwa. Pandaikura, maonero aya akaita kuti ndipanduke. Ndakaguma ndava musikana ane hasha, anoda zvokurwa.
Ndava nemakore 14, ndakatiza pamba kokutanga. Ndaigara ndichibira amai nevabereki vavo mari. Kuchikoro ndaigara ndichingonetsana nevanhu nenyaya yehasha dzangu, uye zvakaita kuti ndigume ndachinjwa zvikoro zvishanu mumakore mashomanana chete. Ndakarega chikoro ndasara nemakore matatu kuti ndipedze. Ndairarama upenyu hwounzenza husingaiti. Ndakapindwa muropa nokusvuta fodya nembanje. Ndaidhakwa uye ndaigara ndichingova kumapati. Ndakatangawo kutengesa zvinodhaka. Kurarama munyika ine vanhu vanotambura uye vanofa kwaindiodza mwoyo. Saka zuva nezuva ndaingoraramira mafaro chete.
Muna 1998, ndiine makore 24, ndakasungwa panhandare yendege yeSão Paulo kuBrazil, pandaiedza kupinda nezvinodhaka munyika iyi kunozvitengesa. Ndakatongerwa makore mana mujeri.
Muna 2000, Zvapupu zvaJehovha zvakatanga kushanyira jeri randaiva kamwe chete pavhiki. Mumwe wavo ainzi Marines aindiitira mutsa chaizvo. Akaita kuti ndive nechido chokuziva zvakawanda nezveBhaibheri. Ndakabvunza vamwe vasungwa kana vaiziva nezveZvapupu zvaJehovha sezvo ndakanga ndisati ndambonzwa nezvavo. Chakandishamisa ndechokuti vanhu vakawanda vandaibvunza vaitaura zvakaipa nezveZvapupu. Mumwe musungwa akanditi ndipinde dzimwe chechi dzose hadzo asi kwete yeZvapupu zvaJehovha. Zvaakataura zvakaita kuti ndide kutoziva kuti sei vanhu ava vaivengwa zvakadai. Ndakazoona kuti imhaka yokuti chitendero chavo ndechechokwadi. Bhaibheri rinoti munhu wose anoedza kutevera Jesu nomwoyo wose achatambudzwa.—2 Timoti 3:12.
Panguva iyoyo, ndakanzi ndinoshandira kuchivako chevakuru vakuru vejeri. Rimwe zuva ndakawana mamwe mabhokisi aiva nemagazini ekare eNharireyomurindi neMukai! * mune imwe imba yaichengeterwa zvinhu. Ndakaenda nemagazini acho kuchitokisi changu ndikatanga kuaverenga. Pandairamba ndichiaverenga, ndaiita somunhu ari mugwenga rakaoma achangobva kuwana tsime remvura inotonhorera. Sezvandakanga ndisina zvakawanda zvokuita, zuva nezuva ndaidzidza Bhaibheri kwemaawa akawanda.
Mumwe musi ndakashevedzwa kuhofisi yejeri. Ndaitarisira kusunungurwa mujeri, saka ndakakurumidza kuunganidza tunhu twangu, ndichibva ndaoneka vamwe vasungwa ndokumhanyira kuhofisi yacho. Asi pandakasvikako, ndakaudzwa kuti pane imwe mhosva yandaipomerwa, yokuti ndaiva nemapepa okunyepera. Saka ndakatongerwa mamwe makore maviri mujeri.
Pakutanga ndakaora mwoyo zvisingaiti. Asi kwapera mazuva ndakazoona kuti zvine zvazvainge zvakanakira. Kunyange hazvo ndainge ndadzidza zvakawanda muBhaibheri, ndaida kuti kana ndabuda mujeri ndienderere nemararamiro andaimboita ndisati ndasungwa. Saka ndaida nguva yakawanda yokuchinja.
Dzimwe nguva ndaimboona sokuti hazviiti kuti Mwari andione somumwe wevanamati vake. Asi ndaifungisisa ndima dzakaita sa1 VaKorinde 6:9-11. Ndima idzi dzinoratidza kuti vamwe vaKristu vepakutanga vaimbova mbavha, zvidhakwa, uye makororo vasati vava kushumira Jehovha. Asi vakabatsirwa naJehovha vakachinja. Muenzaniso wavo wakandikurudzira chaizvo.
Zvaiva nyore kurega zvimwe zvakaipa zvandaimboita. Somuenzaniso, hazvina kumbondinetsa kurega kushandisa zvinodhaka. Asi chakandinetsa kurega kusvuta fodya. Ndakarwisana nedambudziko iri kwerinopfuura gore, ndikazobudirira. Ndakabatsirwawo nokuongorora kukanganiswa kunoitwa utano nokusvuta fodya. Kunyengetera kuna Jehovha nomwoyo wose ndiko kwakanyanya kundibatsira kurega kusvuta.
“Ndakanga ndawana baba vanopfuura vamwe vose, vaisazombofa vakandisiya!”
Zvandairamba ndichiswedera pedyo naJehovha, zvishoma nezvishoma ndakatanga kukurira mafungiro andaimbova nawo patakatizwa nababa. Mashoko aPisarema 27:10 akandinyaradza chaizvo. Ndima iyoyo inoti: “Kunyange kana baba vangu naamai vangu vaizondisiya, Jehovha aizonditora.” Ndakaona kuti ndakanga ndawana Baba vanopfuura vamwe vose, vaisazombofa vakandisiya! Upenyu hwangu hwakanga hwava nechinangwa. Muna April 2004, kwangopera mwedzi mitanhatu ndabuda mujeri, ndakabhabhatidzwa ndokuva mumwe weZvapupu zvaJehovha.
Ndava munhu anofara. Ndava noutano hwakanaka chaizvo uye pfungwa dzangu dzagadzikana kupfuura pandaiva muduku nokuti handichaiti zvakaipa. Tinowirirana nemurume wangu uye ndava noushamwari hwatsika nditsikewo naBaba vangu vokudenga, Jehovha. Ndakawana vanababa vakawanda, vanaamai, vakoma nehanzvadzi pavanamati vake. (Mako 10:29, 30) Ndinofara kuti vaiva netariro yokuti ndaigona kuchinja, ini wacho ndisati ndatombozviona.
Dzimwe nguva pandinofunga mararamiro andaiita, ndinozvipa mhosva. Asi ndinonyaradzwa nokuziva kuti munyika itsva yaMwari yaanovimbisa, zvinhu zvakaipa “hazvizoyeukwi.” (Isaya 65:17) Iye zvino, zvakaitika kwandiri zvinondibatsira kuti ndinzwirewo tsitsi vanhu vane matambudziko akafanana neandaiva nawo. Saka ipapo ndingati mararamiro andaiita anondibatsira. Somuenzaniso, pandinenge ndiri muushumiri, ndinoona zviri nyore kutaura nevanhu vakapindwa muropa nezvinodhaka, matsotsi, kana kuti zvidhakwa ndisingavasaruri. Sezvo ini ndakakwanisa kuchinja kuti ndifadze Jehovha, ndine chivimbo chokuti munhu wose anogonawo kuchinja.
^ ndima 29 Akabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Bhaibheri Rinochinja Upenyu​—October 2012